Tag: wpml | Martech Zone
ICanLocalize: N’enweghi ike latesụgharị Ebe Azụmaahịa Gị Iji Ruo Ndị Ọhụrụ
Ndị ọrụ m na-enyere ndị ụlọ ọrụ ahụike na-asụ asụsụ abụọ aka ka ha wulite saịtị ha, bulie ya maka ọchụchọ, yana mepee ndị ahịa ha nkwukọrịta ahịa. Mgbe ha nwere ezigbo saịtị WordPress, ndị wuru ya dabere na ntụgharị igwe maka ndị ọbịa na-asụ Spanish. Enwere nsogbu atọ na ntụgharị asụsụ igwe eji arụ ọrụ saịtị ahụ, agbanyeghị: Olu asụsụ - Ntugharị igwe na-atụgharịghị uche na olumba Mexico nke ndị ọbịa ya. Okwu
Na Mọnde, Nọmba 24, 2020 Na Mọnde, Nọmba 24, 2020 Douglas Karr
WPML bụ ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ maka ịmepe na ịsụgharị ọdịnaya gị na saịtị WordPress ọtụtụ. M na-agbazi ngwa mgbakwunye GTranslate na ugbu a Martech Zone iji mee ntụgharị asụsụ ntụgharị asụsụ dị mfe, asụsụ dị iche iche. Nke a agbasawanyere iru anyị na ụwa yana okporo igwe ọchụchọ engine na saịtị m. Anyị na-arụ ọrụ na itinye saịtị maka onye ahịa ugbu a nke nwere ọnụ ọgụgụ ndị Hispanic dị mkpa. Mgbe ngwa mgbakwunye dị ka GTranslate nwere ike